Otu esi etinye mbugharị na Debian 11 - LinuxCapable
Otu esi etinye Zoom na Debian 11
Sọnde, Septemba 5, 2021 by Jọshụa James
Na njedebe nke ntuziaka a, ị ga-ama otu esi etinye Zoom na Debian 11 Bullseye gị Sistemụ arụmọrụ na nkuzi nkuzi a.
Nkuzi a ga-eji ngwungwu wget budata igodo GPG; Debian 11 arụnyere nke a na ndabara mana iji nyochaa:
Mwepụta ihe atụ ma ọ bụrụ arụnyere:
Ọ bụrụ na itinyeghị wget, jiri iwu a:
Site na ndabara, Zoom adịghị na ebe nchekwa Debian, ebe ọ bụ na ọ bụghị ebe mepere emepe. Yabụ iji wụnye Zoom, ị ga-achọ ibudata na wụnye na aka na ibe nbudata mbugharị.
Mgbe emechara nbudata ahụ, wụnye ya .deb ngwugwu site na iwu a:
Ị nwere ike ịmalite Zoom n'ụzọ dị iche iche. Otu n'ime ihe a na-ahụkarị bụ (Ngwa -> Ịntanetị -> mbugharị).
Ị nwekwara ike ịmalite Zoom site na ọdụ Debian gị site na ịpị iwu a:
Ọtụtụ ga-ahọrọ ịmalite Zoom n'azụ ọdụ ụgbọ elu ha ugbu a ka ịga n'ihu na-eji ya. Iji mee nke a, jiri ihe ndị a:
Ozugbo emepechara, ị ga-abịa na ihuenyo nbanye ngwa:
Ekele, ị tinyela Zoom site na nbudata ngwugwu .deb wee tinye ya na njikwa ngwugwu APT.
Iwepụ mbugharị ka ọ naghịzi achọ ya dị mfe; Naanị gbaa iwu a:
ụdị (NA), wee pịa (Tinye igodo) ịga n'ihu na iwepụ.
Mara, nke a ga-ewepụ Zoom na ndabere ya niile.
N'ime ntuziaka ahụ, ị ​​mụtala otu esi etinye Zoom site na iji nhọrọ dị iche iche wee wepụ ya. N'ozuzu, Zoom bụ ihe ọzọ na-atọ ụtọ na nyiwe ndị ama ama dị ka Skype maka azụmaahịa ma na-atụ aro ka ịlele ma ị na-achọ ihe ọhụrụ.
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Mbugharị Mail igodo
Otu esi etinye ihe nchịkọta Go (Golang) na Debian 11